के चन्द्रमामा ‘फोर जी’ संभव होला ?
लण्डन । कतिपय मोबाइल प्रयोगकर्ताले तीव्र गतिको फोर जी नेटवर्कको प्रयोग गर्न नपाइरहेका बेला चन्द्रमामा त्यसको शुरूवात गर्न लागिएको छ।
भोडाफोन जर्मनी र नोकिया कम्पनी मिलेर चन्द्रमामा फोर जी सञ्चालनमा ल्याउनेछन्। फोर जीको प्रयोग गरेर रोबोटले त्यहाँबाट प्रत्यक्ष तस्वीरहरू पठाउन सक्ने बताइएको छ। बर्लिनको पीटी साइन्टिस्ट्स कम्पनीका लागि फोर जी नेटवर्क सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो।
उक्त कम्पनीले चन्द्रमामा निजी रोबोट पठाउने योजना बनाएको छ। जसअन्तर्गत ‘एपोलो ११ मिशन’ को ५० वर्ष पूरा भएको अवसर पारेर सो कम्पनीले चन्द्रमामा एउटा ‘लञ्चर’ र दुईवटा रोबोट पठाउनेछ। ‘एपोलो ११ मिशन’ अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था नासाको महत्त्वाकांक्षी परियोजना थियो। जुन परियोजना अन्तर्गत सन् १९६९ मा नील आर्मस्ट्रङ्ग र एड्विन अल्ड्रिनले पहिलो पटक चन्द्रमामा पाइला टेकेका थिए।
सूर्य: अभूतपूर्व परियोजना
भोडाफोन जर्मनीले भनेको छ, “आगामी वर्ष चन्द्रमामा फोर जी नेटवर्क हुनेछ। भोडाफोनले चन्द्रमामा पहिलो फोर जी नेटवर्क स्थापना गर्ने योजना बनाइरहेको छ। त्यसका लागि कम्पनले प्राविधिक साझेदारका रूपमा नोकियालाई चयन गरेको छ।”
पीटी साइन्टिस्ट्सका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोबर्ट बोमले सौर्यमण्डलमा सस्तो अनुसन्धानको दिशामा यो पहिलो कदम हुने बताएका छन्। उनले भनेका छन्, “यो प्रविधिको प्रयोगबाट हामीले सजिलो र कम खर्चमा एचडी भिडिओ डेटा प्राप्त गर्न सक्नेछौँ।”
अडी कार निर्माता कम्पनीले बनाएको रोबोट पहिलो पटक निजी खर्चमा चन्द्रमामा पठाइनेछ।
कस्तो हुनेछ उपकरण?
सामान्यतया इन्टरनेट सेवाका लागि टावर राखिन्छ। तर चन्द्रमामा त्यस्तो हुनेछैन। नोकियाले फोर जीका लागि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा हलुका ट्रान्समिशन उपकरणको निर्माण गर्नेछ।
नोकियाका अनुसार उक्त उपकरण एक किलोभन्दा पनि कम तौलको हुनेछ। फोर जीका लागि १८०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी ब्याण्डको प्रयोग गरिनेछ, जुन एचडी भिडिओका लागि आवश्यक हुन्छ। सबैभन्दा पहिला दुईवटा रोबोटले ‘बेस स्टेशन’ अर्थात् लञ्चरलाई एचडी भिडिओ पठाउनेछन् र त्यसपछि ‘बेस स्टेशन’ ले उक्त भिडिओलाई पृथ्वीमा पठाउनेछ।
फोर जी नै किन?
प्रश्न उठ्छ यो महत्त्वाकांक्षी योजनाका लागि फोर जी नै किन रोजियो? फाइभ जी किन रोजिएन? यसको जवाफ समाचार संस्था रोयटर्सको एउटा रिपोर्टमा दिइएको छ। उक्त रिपोर्ट अनुसार योजनासँग सम्बन्धित एकजना अधिकारीले फाइब जी अहिले परीक्षणको क्रममा रहेकोले फोर जी नै रोजिएको हो।
चन्द्रमाको सतहमा फाइब जीले काम गर्ने वा नगर्ने स्पष्ट भइसकेको छैन। अहिलेसम्म रोबोटहरूबीच सम्पर्क कायम गराउन एनालग रेडियो ट्रान्समिशन विधिको प्रयोग गरिन्थ्यो। फोर जीबाट सम्पर्क स्थापित गराउन एनालग रेडियोको तुलनामा कम ऊर्जा खपत हुनेछ।
पृथ्वीदेखि चन्द्रमाको दूरी ३.५८ लाख किलोमिटर रहेको छ।(बीबीसी)
२०७४ चैत ६ मंगलबार १५:१०:०० मा प्रकाशित